Maresitorendi, mabhawa uye maresitoreti anovhurwa muGreek mushure mekuvharwa kwemwedzi mitanhatu-COVID-6
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Greece Kupwanya Nhau » Maresitorendi, mabhawa uye maresitoreti anovhurwa muGreek mushure mekuvharwa kwemwedzi mitanhatu-COVID-6
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • Hurumende Nhau • Greece Kupwanya Nhau • Health News • Hospitality Industry • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau • Waini & Midzimu
YeGirisi yechipiri COVID-19 kukiya, iyo yakatanga musi waNovember 7, 2020, iri kudzikiswa zvishoma nezvishoma muchirimo chino
Chikamu cheGreek chekudyira uye chekudyira chakatangazve pasi pezvirambidzo pamberi pekuvhurwa kwemwaka wekushanya
Kudya uye kunwa zvivakwa zvinongobvumidzwa kushandira vakagara vatengi kunze
Vatengi vanofanirwa kunyorera musangano uye kutumira mameseji kunhamba yenyika
Mushure memwedzi mitanhatu yekuvharwa kwecoronavirus, maresitorendi, maresitorendi nemabhawa zvakazovhurwa zvekare Girisi vhiki ino.
YeGirisi yechipiri COVID-19 kukiya, iyo yakatanga musi waNovember 7, 2020, iri kudzikiswa zvishoma nezvishoma muchirimo chino, sezvo huwandu hwezviitiko zvitsva zvecoronavirus zvadzikama nguva pfupi yadarika uye kubaiwa kwevanhu kuri kuenderera.
Chikamu cheGreek chekudyira uye chekudyira chakatangazve pasi pezvirambidzo pamberi pekuvhurwa kwemwaka wekushanya, uyo wakarongerwa Chivabvu 15.
Kudya uye kunwa zvivakwa zvinongobvumidzwa kushandira vakagara vatengi panze, nevanhu vanosvika vatanhatu patafura uye nematanho akachengeteka pakati pematafura. Vamiririri vanosungirwa kupfeka zvidziviriro kumeso uye vanotora bvunzo mbiri dzeCOVID-19 pavhiki.
Vatengi vanofanirwa kunyorera musangano uye kutumira mameseji kunhamba yenyika kuti varatidze kubuda kwavo. Zvese zvekudya uye zvekumwa zvivakwa zvinofanirwa kuvhara na11.00 pm yehusiku-yenguva yekubuda.
Kwemwedzi mitanhatu yapfuura, maresitorendi eGreek maresitorendi aigona kungopa zvekutora uye zvekutora masevhisi. Vazhinji vakasarudza kuramba vakavharwa.
Pamusoro pegore rapfuura, chikamu cheresitorendi chakarasikirwa nemari inodarika mabhiriyoni maviri nezviuru zvemadhora (mabhiriyoni matatu emadhora), sekufungidzira kuchangobva kuitwa neHellenic Statistical Authority (ELSTAT).
Nyika yeGreek pasuru yematanho ekutsigira inokwana gumi nemashanu euros gore rino, zvakapetwa kaviri fungidziro yekutanga ye15 bhiriyoni. Iko kuwanda kwehuwandu hwehuwandu hwemapakeji ekutsigira kubvira pakatanga denda iri pamabhiriyoni makumi mana nemakumi mana emadhora, Gurukota rezveMari Christos Staikouras akadaro mazuva mashoma apfuura.
Matanho aya anosanganisira rubatsiro rwezvikwereti zvebhangi, kumiswa kwemitero uye mari yeinishuwarenzi yemagariro uye rubatsiro rwemari kuburikidza nemari yeEuropean Union (EU) yekubhadhara rendi nezvimwe zvinodhura.
Sezvo nyika iri kunetsekana kubata denda iri, kubaiwa nhomba kuri kuenderera mberi munyika dziri kuwedzera munyika dzine majekiseni ekudzivirira chirwere checoronavirus. Anenge mamirioni 3.1 emishonga yekudzivirira akagashirwa kuGreek kusvika ikozvino.